Kemgbe e kere ụwa, ndị mmadụ na-arụ ụka banyere ụdị nwoke dị mkpa karị: nwoke ma ọ bụ nwanyị. Site n'otu oge ahụ, enwere ike ịlụ ọgụ n'etiti nwanyị na nwoke maka nnukwu ebe onye ndu na mmekọrịta.
N'elu ile anya mbu, ihe di iche n'etiti nwanyi na nwoke bu ihe puru iche. A na-ewere nwanyị site na mgbe oge dị ka onye na-elekọta ụlọ na nne, nwoke - onye na-akwụ ụgwọ na onye na-echebe ya. N'oge a, echiche ndị a agbanweela ntakịrị. Otú ọ dị, ọdịiche dị ukwuu n'etiti nwoke na nwanyị na-ebili na nke mmekọahụ.
Banyere ụmụ nwoke
Ọ bụghị ihe nzuzo na ụmụ mmadụ hụrụ n'anya, ihe nkiri ahụ na-adọrọ mmasị ha, nwanyị ahụ, n'ụzọ dị iche, enweghị mmasị n'ihe oyiyi ahụ, ma ọ na-elebara ísì ụtọ nke nwoke ya anya. Mgbe inwe mmekọahụ, nwoke na-eme ihe dịka onye na-eme ihe ike, nwanyị na-ejikwa ọchịchọ obi ya na-edo onwe ya n'okpuru ya. Ya mere, ka nwoke ahụ ruo ebe kachasị mma, ihe ahụ n'onwe ya ga-ezuru ya, ebe ọ bụ na ọ na-enwe obi ụtọ site n'àgwà nwanyị nke ọtọ. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ụmụ nwoke na-enweta orgasm na mbụ mmekọahụ, mgbe ha na-efu ha amaghị nwoke. Ọ na-esiri nwanyị ike ịmalite ime ihe ọ bụla, n'ihi nke a, ọ chọrọ ahụmahụ, mara nke ọma na ahụ ya na mpaghara ya dị iche iche, iji mụta otú e si eme ka onwe ya hapụ onwe ya na ịhapụ echiche ya banyere ihe ndị a kụziiri anyị kemgbe anyị bụ nwata.
Banyere ụmụ nwanyị
N'iji ya tụnyere nwoke, ogwe aka nwanyi nwere ọtụtụ mgbe ike ma dị ogologo oge, dịka ike na àgwà nke nwanyị na-enwekarị mmetụta uche. Ọ bụrụ na nwanyị enweghi obi ike na nwoke, n'ihu ya na-enwe nchekasị mmetụta uche, na-atụ ụjọ na onye òtù ọlụlụ nwere ike ịtụ ya ma ọ bụ kpasuo ya iwe, mgbe ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịnweta ihe ọ ga-eme ọbụna onye ọ hụrụ n'anya.
Dika ihe nchoputa na-egosi, oke umuaka ndi nwanyi na-eme mkpesa na enweghi obi uto na obi ha n'anya site n'aka ndi ha na ha. N'ụzọ dị iche, mkpesa nke ụdị a site na ụmụ mmadụ na-abịa ugboro atọ na-erughị.
Ndụ nwanyị na nwanyị na-enwe mmekọahụ na-enwekwa mmetụta siri ike site n'iji oge nsọ ya. Ọnọdụ ụmụ nwanyị na-adabere na ọnọdụ hormonal nke nwanyị, nke bụ ihe mere na mgbe ụfọdụ, o yiri ka iwe, ụjọ na nsogbu. Tụkwasị na nke ahụ, ọchịchọ agụụ mmekọahụ na-abawanye ma ọ bụ na-ebelata dabere na ụbọchị nke ọhụụ, nke kachasị elu ọ na - erute mgbe ọ na - azụ nwa - oge a na - ekwu na ịlụ fatịlaịza.
Ọzọkwa, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ikom nwere àgwà na-ezighị ezi banyere ịkwalite mmekọahụ na nkwupụta nke ụzọ ya. Ha na-elekarị ihe ngosi nke ụzọ ahụ anya dịka ihe ịrịba ama nke ịla n'iyi. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọnọdụ ebe ọ bụla a na-ejide mmadụ na egwu nke onwe ya na-enweghị ike ịmalite ma jiri ya tụnyere ndị mmekọ mbụ na ọnọdụ ụfọdụ. N'ụzọ dị mwute, nnyocha e mere egosiwo na ihe dị ka pasent 60 nke ụmụ nwoke na-ebo ụmụ nwanyị ụta n'ihi ọdịda mmekọahụ ha, na imeju mmiri na oyi na-atụ ndị inyom na-ewerekarị ihe kpatara nke a, yana oke ụzọ.
Ịgba onwe gị agụụ maka nwanyị bụ otu nhọrọ iji mụta ma ghọta ahụ gị, ma nwee ike inwe mmekọahụ. Ọtụtụ ndị ikom na-emeghachi omume na ịlụ onwe ha nwanyị n'ụzọ dị ukwuu, n'ihi na ha kwenyere na n'ọnọdụ a, ha anaghị egbochi onye ahụ. Ka o sina dị, ihe ka ọtụtụ n'ụmụ nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ na-eche na ịlụ nwanyị na-eme onwe ya ihe mbụ ọ ga-eme iji gwọọ nke a na-akpọ mmiri oyi.
Inweta nkwekọrịta zuru oke
Iji chọpụta na esemokwu uche na ọdịiche dị n'etiti nwanyị na nwoke abụghị ihe mgbochi iji nweta nkwekọrịta n'ime mmekọrịta, onye aghaghị ịgbalị ịghọta onye ọlụlụ ya na nkà mmụta uche ya. N'inwe ihe ọmụma banyere ụkpụrụ ndị bụ isi nke omume onye òtù ọlụlụ gị, ị ga-ahụ ma ọ bụ ga-enwe ike ịtụ anya omume na omume ndị ga-enyere gị aka ịghara imehie ihe na mmekọrịta ahụ.
Ike ọgwụgwụ na mmekọrịta gị na onye ị hụrụ n'anya, ihe ị ga-eme?
Kwere onwe gi ma hu onwe gi n'anya
Nwoke m ọ dị mma maka mmekọrịta siri ike
Ọ bụrụ na di aṅụ
Ihe dị iche n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ agbọghọ
Ihe ịrịba ama nke ndị na-enweghị isi na otu esi eji ntakịrị ndị na-enweghị uche na ụmụ okorobịa
Ụzọ ị ga-esi bụrụ nwa agbọghọ kachasị mma maka enyi nwoke gị
Esi eme ememe Krismas na ezinụlọ
Ihe ngbochi megide oyi
Kedu afọ ole ka ọ ka mma inye nwata ahụ n'ụlọ akwụkwọ ọta akara?
Ụdị egwuregwu ọ bụla ị ga-eme n'ụlọ iji belata ibu
Ezi ntụziaka nke mma site na Cleopatra dị mma
Nri nri anuarepia maka ugwo ngwa ngwa
Ụbọchị nke mmụọ ozi: gịnị bụ omenala ime?
Nri anụ ezi a gụrụ
Esi ewepu nchapu site na ntu ntu ndi mmadu
Kedu ihe inye nwata maka afọ ọhụrụ na ụlọ akwụkwọ ọta akara?
Otu esi kụziere nwata ka ọ hie ụra
Kedu ihe ọ pụtara iri nri?
Ụdị Ejiji Ụgha 2014
Chicken na shiitake mushrooms
Kedu esi kwadebe nwa nwanyị maka nleta mbụ ya na onye ọkachamara n'ọrịa?
Uru na nsogbu nke marmalade
Ntuziaka maka ojiji nke baths